चराहरुकाे सम्‍मेलन – मुलधार न्युज
Home > कला > चराहरुकाे सम्‍मेलन
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:१५
आफू बाँचिरहेको जीवनदेखि चराहरू थकित हुन्छन् । संसारका अस्तव्यस्ततादेखि उनीहरू आजित हुन्छन् । भोगिरहेको जीवनको विकल्प खोज्छन् । त्यो विकल्प नायक सिमोर्घलाई भेटेपछि समाधान हुन्छ भन्नेमा उनीहरू पुग्छन् । जीवनलाई बदल्ने नायक सिमोर्घको खोजीमा निस्कनले सल्लाह गर्छन् । तर उनीहरू लामो र कष्टप्रद यात्रा गर्न हिचकिचाउँछन् । कोही बीचबाटै भाग्छन् । अन्तिममा उनीहरू नायकको खोजीमा सातवटा उपत्यका नाघ्दै जाने निर्णयमा पुग्छन् ।
२० असोजबाट काठमाडौंको शिल्पी थिएटरमा प्रदर्शन भइरहेको ‘चराहरूको सम्मेलन’ नाटकको दृश्य हो, यो । पर्सियाका सुफी कवि फरिद उद्दीन अत्तरको नाटकलाई पुष्पराज आचार्यले नेपालीमा अनुवाद गरी अभिनेत्री दिया मास्केले निर्देशन गरेको यो नाटकमा चराहरू उड्दै उड्दै जान्छन् । यात्रामा चराहरूको नाइके फाप्रेले विभिन्न रोचक कथाहरू सुनाउँछन् र उनीहरू एकपछि अर्को उपत्यकाहरू तर्र्दै जान्छन् । मरुभूमिको अत्यास लाग्दो बाटो, राजकुमारी र दासको रोमाञ्चक प्रेमकथा, ऋषिको कथा सुन्दै उनीहरू जान्छन् । ती उपत्यकाहरू खोजी, प्रेम, बुझाइ, विस्मय, विनास, एकता र मृत्युको हुन्छ । जसले जीवनको फरक–फरक अर्थ दिने गर्छ ।
नायकको खोजीमा हिँडेको यात्रा रोकिँदैन । नायक सिमोर्घ भेट्ने अभिलाषाले रहस्य र विस्मयका उपत्यकाहरू पार गर्दै उनीहरू काफ भन्ने प्रदेशमा पुग्छन् । जहाँ सिमोर्घ भेटिन्छ भनिएको थियो । अन्तिममा उनीहरूले सिमोर्घ भेट्छन् । सिमोर्घको अनुहार आफैंसँग मिल्दो जुल्दो देख्छन् । सिमोर्घ अरू कोही नभएर स्वयं आफैं भएको उनीहरूले बुझ्छन् ।
आफैंलाई भुलेर नायकको खोजीमा भौतारिरहने दृश्य देशसँग मिल्दोजुल्दो छ । मानिसहरू पटक–पटक असल नायकको खोजीमा आफ्नो बुढी औंला रंग्याँउछन् । तर, मसी नसुक्दै गाली गर्न थाल्छन् । उनीहरूले नायकले धोका दिएको निष्कर्षमा पुग्छन् । तर, कहिल्यै आफैंलाई चिन्दैनन् । चराहरूले पत्ता लगाएको त्यो रहस्यले त्यही जीवन दर्शन सिकाउँछ । आफैंलाई भुलेर अरूको खोजीमा भौतारिनेहरूका लागि चराहरूको सम्मेलन एउटा पाठशाला बनेको भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
एक्टर्स स्टुडियोका २२ कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको नाटक सुन्दर बनेको छ । अभिनेत्री मास्केको मिहिनेत प्रशंसालायक छ । ढुकुर, सुँगा, कोइली, भँगेरा, मयुर जस्ता विभिन्न चराहरू बनेर कलाकारहरूले गरेको अभिनयमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । करिब डेढ घण्टा लामो नाटकले समयको बर्बादी गर्दैन । नाटकको मुख्य विषयसँग सम्बन्धित रहेर देखाइएको दृश्यहरू रमाइला छन् । प्रत्येक दृश्यले मानिसलाई आफंैलाई चिन्न प्रेरित गरेको छ ।
मानिसलाई जिउन एकअर्काको सहयोग चाहिन्छ । आशा र भरोसा जीवन जिउने कला बनेको छ । मानिसहरू जब अप्ठेरोमा पर्छन्, तब कसैको साहसको खोजी हुने गर्छ । एक अर्थमा मानिसलाई परिजीवी प्राणी पनि मान्न सकिन्छ । कसैको पर्खाइ र आसैआसमा मानिसले सारा जीवन त्यसै बिताउँछन् । तर, आफूलाई चिन्न भुल्छन् ।
आफैंभित्रको सबलतासँग अपरिचित भएर मानिसहरू देशदेशावार भौतारिरहन्छन् । नाटकमा यही विषयको कलात्मक प्रस्तृति देख्न सकिन्छ । चराहरूको प्रतीकात्मक प्रस्तुतिले मानवीय समाजलाई संकेत गरेको छ । नाटकमा लागि रंगमञ्च विशेष प्रकारले झकिझकाउ छैन । तर, अपर्याप्त लाग्दैन । विदेशी नाटकमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाली रंगमञ्चको विडम्बना अझै हटेको छैन । एक्टर्स स्टुडियोले टलकजंग भर्सेस टुल्के, बाँकी उज्यालो, मलामी, काफ्का, कोर्टमार्सल जस्ता चर्चित नाटकहरू मञ्चन गरिसकेको छ ।
पहिलो पटक नाटक निर्देशकको रूपमा उभिएकी दियाको चराहरूको सम्मेलन एउटा परीक्षा थियो । उनले नाटक निर्देशन गर्नुअघि सकिन्न कि जस्तो लागेको बताउँछिन् । तर, ३ महिनाको मिहिनेतबाट उनी पास भएकी छिन् । नाटकको मूल मर्म नबिगारेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘नाटक सोचेको जस्तो राम्रो बनाउन सकिनँ होला । तर, बिगारेको छैन ।’
सैनिक इन्टेलिजेन्स शिक्षालयका प्रशिक्षार्थीद्धारा रासस अवलोकन
गाैरा पर्वले साँस्कृतिक एकतालाई थप मजवुद बनाएको छः प्रधानमन्त्री
कार दुर्घटनाः डिआइजी भण्डारीको परिवारसंग भेट्ने सपना चकनाचुर
प्रदेश न. ३ काे राजधानी भक्तपुरकाे सांघादेखि पांचखाल वरिपरी बनाउन नेता र डनहरुको चलखेल
प्रचण्ड र अाेलीले संयुक्तरुपमा दिए कार्यकर्तालाई निर्देशन
सशस्त्र प्रहरीद्धारा ३२ लाख मूल्य भन्दा बढीका लताकपडा बरामद
आमनागरिकको विश्वास प्रहरी संगठनको शक्तिको श्रोत हाेः महानिरीक्षक खनाल
फुलपातीमा फर्किने गरेर पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भान्छे र सुसारेसहित विदेश यात्रामा, थाइल्यान्ड, श्रीलंका हुदै भारत पुग्ने
डा. केसी सेनाको एमआई १७ नाइटभिजन हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँमा
नेपाल-चीन सैन्य अभ्यास, नेपाली टोली फर्कियो